Dark Tourist - YTV
Home » Daily Show » Dark Tourist
Daily Show, Programs January 12, 2021 6:55 am
“Dark Tourist” နဲ့အတူ စွန့်စွန့်စားစား ခရီးတွေသွားရအောင်…
YTV Channel ကနေ ချစ်ရတဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် ထူးထူးခြားခြား မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Dark Tourist” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ပြသပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်…
ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားက သွားရောက်ဖို့ခက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေ၊ လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့နေရာတွေက ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ဓလေ့တွေဆီကို ကို အန္တာရယ်ကြားကနေ ခြေဆန့်ခဲ့တဲ့စွန့်စားသွားလာသူ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားဂျာနယ်လစ် David Farrier ရဲ့ အကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်စွန့်စားသွားလာနေရသလို လိုက်ပါခံစားကြည့်ရှု့ရမှာဖြစ်ပါတယ်…
David Farrier ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာခရီးစဉ်ကြီးမှာ ဘယ်လိုနေရာတွေပါဝင်နေမလဲ…? ဘယ်လိုထူးဆန်းတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ဓလေ့တွေဖြစ်နေမလဲ…? အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ခရီးစဉ်တွေမှာ ဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့မလဲ…? ဆိုတာတွေကို ခံစားကြည့်ရှု့ရမယ့် “Dark Tourist” ဇာတ်လမ်းတွဲကိုတော့ အပတ်စဉ် ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ၅နာရီ ၃၀မိနစ်အချိန် YTV Channel မှာ ပြသနေပြီဖြစ်တာကြောင့် စောင့်မျှော်အားပေကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီနော်…
YTV Channel ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အခြားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများကို အောက်ပါ Youtube Channel တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်...